Fitokonana etsy sy eroa : vonjy tavanandro sisa herin’ny FATE
Raha tsy fanambazana vola dia herisetra sisa fomba entin’ny FATE mampitsahatra ireo fitokonana isan-karazany. Raha ny eo amin’ny tontolon’ny fampianarana dia nanomboka nidiaran’ny fampihorohoroana izany ka ilay karama sisa hany raisin’ireto mpanabe ireto indray no rahonan’ny ministra hotapahina raha mbola mitokona izy ireo. Rehefa nanampy azy ireo moa ny mpianatra ka niha-maro an’isa sy nahery vaika ny fitakiana dia niaditra an-tsehatra ny mpitam-basy. Vokany dia nisy sahady ny mpianatra naratra mafy sy voasambotra omaly. Endrika famoretana tsy mitondra fitoniana avokoa izany rehetra izany ary natao hanakana izay mety ho fanehoan-kevitra hampihozongozona ny toeran’ny mpanongam-panjakana.
Ny mahatalanjona dia ahilika amin’ny mpandala ny ara-dalàna hatrany ny rihitra. Raha naratra noho ny hatezeran’ny olona ohatra ny zandarin’ny EMMOREG iray omaly dia nanao vava sahady ny Jly Baomba fa raha vao tafatsanga ranamana dia « ho entina eny amin’ny Magro hanoro ireo rehetra nikasi-tanana azy ». Nandritra ny fotoana namparatra an’ity zandary ity anefa dia hery telo samy hafa no nihetsika teny Anosy fa tsy ny zanak’i Dada irery.
Ny tokony ho tsapan’ireo rehetra mbola mamikitra amin’izao fitondrana tsy ara-dalàna sady tsy manara-dalàna izao dia tsy hampangina ny Malagasy velively izany. Taorian’ny fampitandremana nataon’ny SECES hanao taona fotsy ohatra dia efa mitokona indray ny « Personnel Administratif et Technique » eny amin’ny anjerimanontolo noho ny fahataran’ny karaman’izy ireo. Ny baraingo mipetraka hatreto dia hoe tara ve sa tsy hisy intsony izany karaman’ny PAT eny Ankatso izany ?
Ny marina eto amin’ny Firenena dia ilay mpitondra mihitsy no nanao fampanantenana poakaty hany ka tsy mahavaha ny olan’ny mpiray tanindrazana akory. Raha izay « famonoana afo » amin’ny fanambazana vola izay mihetsika izay dia efa maro ary efa tokony tsy hisy hitaky ny zony intsony. Saingy olana goavana ny tsy fahazahoana ny fanampiana avy any ivelany noho ny tsy fankatoavan’izao tontolo izao ny fanonganam-panjakana. Mila tonga saina arak’izany ny hery velona rehetra mba tsy ho voajonon’ny fanafody ahosotra ivelany fa hitady izay hamahana ny olana fototra mba hampilamin-tsaina ny Malagasy rehetra.
Fampiharana ny tondro zotra : manam-pahefana ve ny Ankolafy RAVALOMANANA ?
Enim-bolana mahery andro vitsy izao no natao sonia teny Ivato ny tondro zotra. Nanaiky hiditra anatin’ny fitantanana ny tetezamita ny Ankolafy RAVALOMANANA notarihin’ny lehiben’ny delegasiona Mamy Rakotoarivelo ary nanome toky fa hiady ho an’ny fampiharana an-tsakany sy an-davany ny tondro zotra ary tsy mivadika amin’ny Filohya RAVALOMANANA mandrakizay. Tao anatin’izay enim-bolana izay anefa dia efa maro ny sedra nolalovan’ny tondro zotra ary tsy dia nahitana taratra izay herin’ny Ankolafy RAVALOMANANA ny tranga rehetra.
Raha ny fahitana azy dia sanatria toa efa manomboka « mahay milomano » koa ireo milaza fa zanak’i Dada any anaty rafitra. Nandalo ny taratasy fanakanana ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA sy ny vady andefomandriny fa tsy nahavita nanafoana izany ireo niditra anaty fitantanana. Tsy nivonona handray fepetra mihitsy amin’ny fandraisana anjara amin’ny fampandehanana ny tetezamita raha tsy efa misy mampiaka-peo ny manodidina. Nipetraka ny fe-potoana nomen’ny mpanelanelana hanatanterahana ny andininy faha-20 sy hametrahana ny lalàna momba ny famotsoran-keloka fa tsy mbola nisy ihany izay mety fihetsika hita maso manameloka izay ataon’ny FATE na dia tsy nohajain’ity farany aza izany fe-potoana izany. Rehefa rosoana volavolan-dalàna hafa ankoatra ny fametrahana ny fitoniana anefa any anaty parlemanta dia mandray anjara hatrany amin’izay paipaika rehetra hampandaniana ireny lalàna ireny ireto « mpitari-tolona » ireto. Sanatria toa mankato izay mitranga na dia tsy mandamina ary indrindra tsy mampody ny Filoha RAVALOMANANA aza izany. Manamafy izany ny nahafahan’ny FATE nitsara ireo manamboninahitra sy ny Pr. Ranjeva mianaka tamin’ny raharaha BANI. Ny raharaha FIGN ihany koa dia efa tonga teny amin’ny lapan’ny fitsarana saingy nanaiky ny fitakiana momba ireo mpitsara mpanampy ny mpitsara mpamoaka didy ka dia nahemotra ny fotoam-pitsarana saingy nolavina kosa ny fangatahana fahafahana vonjy maika. Tsy vitan’ny Ankolafy RAVALOMANANA ny nanakana ireo fitsarana tsy ara-dalàna ireo ary raha ny fantatra aloha dia tsy nanao antso avo tamin’ny SADC momba izany akory izy ireo fa ireo voampanga indray no nahavita nandefa taratasy ho fanairana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena hampitsaharana izany. Vokany : vao maika naletiky ny FATE lalina ireo miaramila ireo satria « manelingelina » azy raha mivoaka.
Aleo aloha dia tsorina fa tsy ny hampandeha ny ministera raisina no nilokalokana fa nidirana anaty fitantanana. Bitika amin’ny vahoaka izany satria tsy mamaha ny krizy saingy asa na goavana kosa ho an’izay mahita tombontsoa amin’ny toerana noraisiny. Tsy hameno isa amin’ny fivoriana tsy ara-potoana lavareny ihany koa no voadin’ireo nahazo toerana ho CT sy CST fa ny hanitrikitrika ny handrosoana haingana ireo lalàna rehetra ahafahana mahita fitoniana politika sy sosialy izay mitarika amin’ny famahana ifotony ny olana. Inoana fa tonga saina amin’izany ny olom-pirenena rehetra, indrindra ireo nahazo toerana, satria raha tsy izany dia ho very an-jambany ny tolona niaretana telo taona ary tsy ho tafody velively ny Filoha RAVALOMANANA. Tsy mbola niova hatyreto ny fahendren’ny Malagasy ary mazava tsara fa « aleo halan’andriana toy izay halam-bahoaka ». Ilay mitondra amin’izao fotoana rahateo mpanongam-panjakana fa tsy nandalo fitsaram-bahoaka tamin’ny fifidianana akory. Ny toky ihany koa fitaka fa ny atao no hita ka ny hanairana ny fahatsiarovan-tenan’ny tsirairay no tena tanjona fa tsy sanatria hiteraka fisalasalana akory.
17 Martsa 2009 – 17 Martsa 2012 : telo taona tao anaty haizina
Telo taona lasa izao no nanapa-kevitra hamindra fahefana tamin’ny miaramila ny Filoha RAVALOMANANA rehefa voatery niala teto an-tanindrazana noho ny fanonganam-panjakana mitam-basy. Telo taona lasa izay dia saika nisy rà mandriaka ny teto Madagasikara raha tsy nanam-pahendrena nisitaka ara-potoana ny Filoha RAVALOMANANA. Telo taona lasa izay namidin’ny « be baoty » tamin’ny mpanongam-panjakana ny « tandroka aron’ny vozona » ka nafindrany tamin’izy ireo ny fahefana nomena azy handamina ny tany. Telo taona lasa izay nibitaka ery ry tgv sy ny namany fa nahalavo ny demokrasia Malagasy.
Telo taona lasa koa izao no niaina tao anaty haizina tanteraka ny vahoaka tsy mandady harona noho ny tsy fahaiza-mitantana laroina fitiavan-tena tafahoatra sy ny toe-tsaina ory hava-manana teo amin’ny mpanao polika Malagasy.
Lavo ny 17 Martsa 2009 tokoa ny demokrasia Malagasy ary nosoloin’ny mpanongam-panjakana gaboraraka sy fangoronan-karena. Hatreto aloha tsy nitondra soa ho an’ny vahoaka ny fanovana nampananatenaina teny an-dalam-be ka nitondrana mpiray tanindrazana hatao sorona nananika lapa. Vao maika nidiran’ny fahasahiranana ny isan-tokantrano ary nikorosofahana tanteraka ny fiainan’ny Malagasy. Tsy nahavita taona akory izay norobaina ny 26 janoary 2009 fa toa vao maika nitarika fahantrana. Ny vahoaka mahantra nefa ny mpanongam-panjakana miaha-dongadonga toa tsy mahatsapa, sa tena minia tsy mahita mihitsy, izay fahorian’ny mpiray tanindrazana aminy. Ao anatin’izany rehetra izany anefa dia vao maika manampy trotraka ny tsy finiavana hamaha olana sy ny halako bika tsy tiako tarehy. Nandritran’ny telo taona tokoa dia nahilika any amin’ny Filoha RAVALOMANANA avokoa ny olan’ny Firenena rehetra na dia efa mibaribary aza fa ny tsy fahaiza-mitantana no lesoka fototra ary ny tsy fanekena hifampiraharaha sy hiara-mamaha olana no faharoa dia mbola lazaina fa mibaby ny hadisoan’ny teo aloha ihany ny FATE. Ireo sakana roa voalaza etsy ambony anefa no ny tsy iverenan’ny fankatoavana iraisam-pirenena ka tsy mampivaha ny lalan’ny fanampiana avy any ivelany noho.
Tsy mbola kivy anefa ny Malagasy fa mbola mananetana ny hazavana tsy ho ela. Mbola manohy ny tolona hanavotana ny Firenena sy hamerenana ny Filoha RAVALOMANANA mba hirosoana amin’ny fampandrosoana miaraka. Dimy andro monja taorian’ny nandaozan’ny Filoha RAVALOMANANA ny fitondrana dia nanomboka nitolona teo amin’ny Kianjan’Ambohijatovo ny mpandala ny ara-dalàna ary hatramin’iny ka hatramin’izao dia mbola manakoako , zary hiakam-pitolomana mihitsy, ny hoe : « avereno Dadanay ».
Misy fotoana hanginana …
Herinandro maromaro izao no tsy naharenesam-peo ny Filoha RAVALOMANANA ary maro no mametraka baraingo noho izany. Ny mpomba ny FATE dia miezaka manely tsaho mahakasika izany ary manararaotra manaratsy endrika ny Filoha eny amin’ireny gazety sy hainoamanjery isan-karazany ireny. Tanjon’izy ireo ny hanakiviana ny zanaky ny ara-dalàna rehetra hany ka tonga hatramin’ny filazana fa lasa « vesatra ho an’i Afrika Atsimo » ny Filoha RAVALOMANANA. Tsy tokony handairan’izany ny zanank’i Dada satria fantatra tsara ny fanajan’ny Filoha RAVALOMANANA ny ara-dalàna ary efa nanambara im-betsaka izy fa tsy hanakorontana fa hitondra fandaminana sy fampandrosoana ho an’ny Firenena.
Tsy mety ihany koa raha amin’izao fotoana isian’ny fanehoan-kevitra sy ny hestiak etsy sy eroa izao no anomezana laka ny mpanongam-panjakana hiampanga azy ho fototr’izany rehetra izany. Tato anatin’ny telo taona manko dia ampifandraisina amin’ny Filoha avokoa ny zava-mitranga eto amin’ny Firenena eny na dia tsy misy idirany aza fa vokatry ny tsy fahaiza-mitantana ataon’ny FATE. Izao fahanginana izao dia mifono asa amin’ny fitadiavana vahaolana amin’ny krizy politika ary tsy mivaona amin’ny fototra efa nijoroan’ny tolom-bahoaka hamerenana ny ara-dalàna sy ny Filoha RAVALOMANANA eto Madagasikara. Efa nanome toky ny Malagasy rehetra rahateo ny tenany fa hanokana ny andro sisa hahavelomany hanasoavana ny Tanindrazana. Mazava hoazy fa matahotra izany ny FATE satria sarotra kokoa ny miady amin’olo-mangina noho ny tsy fahalalana izay mety paika ampiasainy hany ka zary misavoritaka anaty sisa ny ekipan’i tgv rehetra ankehitriny.
07/02/2012 : Raharaha 07 Febroary 2009: nobaboin’ny fankahalana ny lalàna (+vidéo)
Raha tsiahivina dia isan’ny fiakaran-dapa namoizana aina mpiray tanindrazana maro indrindra ny tamin’ny 10 Aogositra 1991. Mbola taty ami’ny kilometatra maromaro tsy nahatongavana teny Iavoloha dia efa niraradraraka ny tifitra ary manamboninahitra maro no nandray anjara tamin’izany, isan’ireny ny filohan’ny filan-kevitra miaramila momba ny fiarovana na ny CMDN ankehitriny, saingy tsy nisy nandalo fitsarana izy ireo. Tamin’ity raharaha 07 febroary 2009 ity anefa dia ireo miaramila izay nanao ny asany niaro ny lapa no nentina teo amin’ny fitsarana noho ny fanajany izany asany izany na dia efa fito metatra niala ny vavahadin’ny lapa aza ireo mpanani-bohitra vao nandray fepetra izy ireo.
Araka ny fijoroana vavolombelona nataon’ny Lt.Kol. Charles Andrianasoavina dia olona enina no tena nikotrika iny 07 febroary iny ary ny iray tamin’izy ireo dia nanitrikitrika fa « tsy maintsy ataontsika izay hisian’ny rà latsaka raha tsy izany tsy ho azontsika ny fitondrana ». Vokany dia nentina nanafika faritra mena ny mpiray tanindrazana ary nisy manamboninahitra ambony nitarika azy ireo na dia mahalala tsara ny lalàna mandidy ny mpitandro filaminana hiaro izany faritra mena izany. Ankoatra ny maha-lapam-panjakana Ambohitsorohitra rahateo dia toby miaramila io toerana io ary misy fiadiana mahery vaika sy saro-pady maro. Izany rehetra izany dia mandidy ireo mpiambina hiaro ity lapam-panjakana ity. Ny tena olana amin’ity raharaha ity dia nanjakan’ny halako bika tsy tiako tarehy toy ny resaka krizy 2009 rehetra ihany na dia miaramila aza no voakasika. Fantatra mantsy fa tsy voatohitohina mihitsy ny lehiben’ny fiarovana tao amin’ny fiadidiana ny Repoblika tamin’izany fotoana na ny antsoina hoe DSP (Directeur de la Sécurité Présidentielle), toy izany koa ny « Chef de Service des Opérations » tao an-dapa na dia izy ireo no mamolavola ny drafitra fiarovana ny lapa na « plan de défense du Palais ». Ireo rehetra izay fantatra fa nitandro ny ara-dalàna hatramin’ny farany ka tsy nanaiky ho vidiana vola no tena nalefa « any ambanin’ny tany » mba tsy hiteny intsony ka natao izay fomba rehetra nisamborana azy. Eny na ny resaka fitsarana sy fampidirana am-ponja aza dia manaporofo izany : raha olona 19 no voarohirohy tamin’ity raharaha ity dia afaka madiodio ny 5 tamin’ireo. Amin’ireo 14 ambiny anefa dia 4 ihany no notanana am-ponja fa ny ambiny navela hiriaria na dia samy voaheloka asa an-terivozona mandrapaha-faty avokoa aza. Baraingo hatreto ny takalon’izany fahafahana izany sy ny tambin’ny fahanginana fa ny olona mitana ny fahamarinana anefa « toy ny volamena latsaka am-bovoka ka tsy avelan’ny hasiny tsy hamiratra ».
Eto am-pamaranana dia tsara ny mampahafantatra antsika fa araka ny tsilian-tsofina dia i tgv vatatenany manokana mihitsy no nibaiko ny hamerenana ny Jly Raoelina any Tsiafahy rehefa fantany fa nafindra tetsy Antanimora ity manam-boninahitra ambony ity.
Ity horonan-tsary fanadihadiana eto ambany dia mampiseho amintsika ny fanomanana ny 07 febroary 2009 sy ny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009 manontolo :